Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelomoya ezintsha zeRoll-Royce zoMbane zoMbane zoMbane ziCima
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Tourism • uthutho • Iindaba eziHlumayo zase-UK
IiRoll-Royce iinqwelomoya zombane
URolls-Royce wenze enye inzame kwirekhodi lehlabathi ngeenqwelo-moya zayo zombane.
Inqwelomoya yokuqala inika inkampani ithuba lokuqokelela idatha yokusebenza ebalulekileyo kumandla ombane wenqwelomoya kunye nenkqubo yokuqhubela phambili.
Ekuphuhlisweni yinkqubo epheleleyo yokuqhubela umbane kwiqonga layo, nokuba yeyokuhamba ngokuthe nkqo kombane kunye nokufika (eVTOL) okanye inqwelomoya.
I-Rolls-Royce ibhengeze namhlanje ukugqitywa kwenqwelomoya yokuqala yombane wayo wonke Umoya woBuchule inqwelomoya. Nge-14: 56 (BST) inqwelomoya yaya esibhakabhakeni iqhutywa yi-400kW (500 + hp) yombane wombane ngowona mthwalo mkhulu webhetri wawakhe wahlanganiselwa inqwelo moya. Eli yayilelinye inyathelo elibhekisa kwilinge lokurekhodwa kweenqwelomoya kunye nelinye inyathelo elibalulekileyo kuhambo lomzi-mveliso wenqwelomoya ukuya kwisigqibo.
IWarren East, iCEO ye Rolls-Royce, wathi: “Uhambo lokuqala lwenqanawa Umoya woBuchule yimpumelelo enkulu kwiqela le-ACCEL kunye neRoll-Royce. Sijolise ekuveliseni inkqubela phambili yetekhnoloji yoluntu ekufuneka idlulise ukuthuthwa komoya, umhlaba, nolwandle kunye nokubamba ithuba lezoqoqosho lotshintsho kwi-zero zero.
Oku ayisiyiyo eyokwaphula irekhodi lehlabathi kuphela; Ubuchwephesha obuphambili kunye netekhnoloji yokuqhubela phambili eyenzelwe le nkqubo inezicelo ezinomdla kwimarike yokuHamba kweMoya yaseUrban kwaye inokunceda ukwenza 'i-jet zero' ibe yinyani. ”
Unobhala wezoShishino wase-UK u-Kwasi Kwarteng uthe: “Le mpumelelo, kunye neerekhodi esinethemba lokuba ziyakulandela, zibonisa ukuba i-UK ihlala ikwindawo ephambili kubuchule bokwenza i-aerospace. Ngokuxhasa iiprojekthi ezifana nale, urhulumente uyanceda ukuqhubela phambili umda, ukutyhala itekhnoloji eza kuthi inyuse utyalo-mali kwaye ivule iinqwelo-moya ezihlambulukileyo ezifunekayo ukuphelisa igalelo lethu kutshintsho lwemozulu. ”
Ngexesha lokuhamba ngenqwelomoya okokuqala, iRoll-Royce iya kuqokelela idatha yokusebenza ebalulekileyo kumandla ombane wenqwelomoya kunye nenkqubo yokuqhubela phambili. Inkqubo ye-ACCEL, emfutshane "Ukukhawulezisa ukufakwa kombane ngenqwelomoya," ibandakanya amaqabane aphambili i-YASA, umqhubi wombane kunye nomenzi wokulawula, kunye nokuqalisa i-Electroflight yokuhamba ngenqwelomoya. Iqela le-ACCEL liqhubekile nokwenza izinto ezintsha ngelixa lihambelana noRhulumente wase-UK ekuphambukeni kwezentlalo kunye nezinye izikhokelo zempilo.
Isiqingatha senkxaso-mali yeprojekthi sinikezelwa liZiko leTekhnoloji yeAerospace (i-ATI), ngentsebenziswano neSebe lezoShishino, isiCwangciso sezaMandla kunye neQhinga lezoShishino kunye ne-Innovate UK.
Ingqonyela yeAerospace Technology Institute, uGary Elliott, uthe: “I-ATI ixhasa ngemali iiprojekhthi ezinje nge-ACCEL ukunceda i-UK iphuhlise amandla amatsha kwaye ikhusele ukukhokela kubuchwephesha obuya kwenza ukuba ubuchwephesha bokuhamba ngenqwelomoya. Siyavuyisana naye wonke umntu osebenze kwiprojekthi ye-ACCEL ukwenza inqwelomoya yokuqala ibe yinyani kwaye sijonge phambili kwilinge lerekhodi lehlabathi eliza kubamba umdla woluntu kunyaka apho i-UK ibambe i-COP26. Ukubhabha okokuqala koMoya woBuchule kubonisa indlela ubuchwepheshe obunokubonelela ngayo ngesisombululo kweminye yemiceli mngeni emikhulu. ”
Inkampani ikhulisela abathengi bayo inkqubo epheleleyo yokuqhubela umbane kwiqonga layo, nokuba kunjalo ukusuka nkqo ngombane kunye nokufika (eVTOL) okanye iinqwelomoya. Inkampani iya kusebenzisa itekhnoloji evela kwiprojekthi ye-ACCEL kwaye iyisebenzise kwiimveliso zolu rhwebo lutsha. Iimpawu ezifunwa “ziiteksi zomoya” kwiibhetri ziyafana kakhulu nezinto eziphuhliswayo Umoya woBuchule, ukuze ikwazi ukufikelela kwisantya se-300 + MPH (480+ KMH)-ejolise kumzamo werekhodi lehlabathi. Ukongeza, iRoll-Royce kunye neairframer Tecnam ngoku basebenza kunye neWiderøe, inqwelo moya yenqila eScandinavia, ukuhambisa inqwelomoya yomkhweli wenqwelomoya kwimarike yabahambi, ekucwangciselwe ukuba ilungele inkonzo yengeniso ngo-2026.
I-Rolls-Royce izinikezele ekuqinisekiseni ukuba iimveliso zayo ezintsha ziya kuhambelana nokusebenza kwe-zero ngo-2030 kwaye zonke iimveliso ziya kuhambelana ne-zero zero ngo-2050.